Ngabe ama-oyster peptides angawuthuthukisa ngempela umsebenzi wesilisa?
1. Ukubuka konke kwe-Oyster
2. Yini i-Oyster Peptide?
3. Imisebenzi Ye-Oyster Peptide Nezinzuzo
4. Yiziphi izinzuzo ze-Oyster Peptide uma ziqhathaniswa neminye imikhiqizo yokugqamisa ezocansi?
5. Ungayithatha kanjani i-Oyster peptide powder? Umuthi we-Oyster peptide?
6. Oyster Peptide Side Umphumela?
8. Amagama wokugcina
Ukubuka konke kwe-Oyster
ukhwathu, isilwane sasolwandle esivela emthonjeni odumile we-oyster, besilokhu sithandelwa abantu abaningi amashumi eminyaka. Ungayidla iluhlaza noma iphekiwe. Noma ngabe iyiphi inketho oyikhethayo, inyama ye-oyster izonikeza umzimba wakho uhlu lwezakhi. Izakhamzimba zifaka amaprotheni, amafutha anempilo, amaminerali kanye namavithamini.
Okunye ukuhlanganiswa kwale nyama ukuthi iphansi kumakhalori.
Kunemikhiqizo eminingi engakhishwa kwinyama ye-oyster, i-oyster peptide yokuba ngomunye wayo. Kulesi sibuyekezo, sizogxila kuma-peptides e-oyster bioactive kanye nomthelela wawo ekusebenzeni kwabesilisa, phakathi kwezinye izinzuzo ezingabakhona.
Kuyini i-Oyster Peptide?
I-Oyster peptide isengezo semvelo esisuselwa kwiprotheni yenyama ye-oyster ngokusebenzisa i-biotechnology enezinyathelo eziningi. I-peptide inothile nge-zinc, i-calcium, i-taurine, kanye namavithamini A, B1, B2, B5, C, D no-E. Ngakho-ke, ingasetshenziswa njengokudla kwezempilo noma ukudla okusebenzayo. Inezinzuzo eziningi zezempilo kubantu, ikakhulukazi abesilisa abanezinkinga zempilo yezocansi.
Ama-peptides e-Oyster anama-pioides anokuphakeme kokuphilayo okuqhathaniswa neminye imikhiqizo evamile ye-oyster. Ngaphandle kwalokho, i-oyster peptide inomsebenzi obaluleke kakhulu ngokomzimba. Okungcono namanje, ngokungafani nemikhiqizo ejwayelekile ye-oyster, i-oyster peptide powder ukunambitheka okuhle futhi ayinayo iphunga lezinhlanzi.
Imisebenzi Ye-Oyster Peptide Nezinzuzo
I-Oyster peptide inemisebenzi nezinzuzo ezilandelayo:
I-taurine enikezwa yi-oyster peptide ingathuthukisa ukucasulwa kwe-bile kumuntu. Ngokwengeziwe, okutholwe ku-oyster kungavimbela ukunqwabelana kwamaqiniso angathathi hlangothi noma kuqede amafutha aqongelelwayo esibindini. Zombili lezi zinto ezisebenza ngokubambisana zisekela isibindi emsebenzini waso wokukhupha izidakamizwa.
Ukwenza ngcono umsebenzi wezocansi
I-oyster peptide inothile ku-arginine, nezinto ze-Zinc, zombili ezibalulekile empilweni yomuntu yezocansi. Isiza ekwakhiweni kwama-hormone ocansi, kufaka phakathi i-progesterone, i-testosterone ne-estrogen.
Lapho uthatha i-oyster peptide powder njalo, uzoqaphela ukuthi uzoba muhle ngokwengeziwe noma muhle usuku nosuku. Lokhu kungenxa yokuthi unikeza umzimba wakho izakhi ezithuthukisa umzimba wakho we-metabolism, okwenza ubukeke unempilo futhi unamafutha amaningi.
Ngaphandle kwalokho, le mpuphu yemvelo inezici ezikhuthaza ukubola kwesikhumba se-melanin. Ngenxa yalokhu, ithoni yakho yesikhumba iyathuthuka futhi iba yande. Ngaphezu kwalokho, iodine ne-tryptophan equkethwe kuyi-peptide kungenza izinwele zakho ukuba zibe mnyama, ngale ndlela zihle.
Amasosha omzimba angcono
Impilo yamasosha akho omzimba ibalulekile empilweni yakho njengoba iyona evikela umzimba wakho ezifweni ezahlukahlukene nasekuguleni. I-Zinc iphakathi kwezinto ezibalulekile ezidingwa amasosha akho omzimba ukuze aqine futhi aphumelele emsebenzini wawo.
Ngenhlanhla, i-oyster peptide inikeza umzimba wakho inani elifanele le-zinc ukuthi amasosha omzimba adinga ukuqhubeka nokufaka amagciwane ayingozi namabhaktheriya e-bay. Ngaphezu kwalokho, i-peptide ivuselela ukukhiqizwa kwe-thymulin yi-thymus gland. Ukukhiqizwa kwe-thymulin okuthuthukisiwe kuholela ekuqondisweni okungcono kwe-T-cell ne-T4 Helper cell, okuholela ekutheni amasosha omzimba abe namandla.
Ezinye zezifo kanye nezimo zezempilo ongazigwema ngokuthatha i-oyster peptide zihlanganisa:
ngifundise ngesifo sikashukela
Vimbela ukulimala kwamahhala
Ukukhishwa kwe-oyster, kufaka phakathi ama-peptides, aqukethe ama-antioxidants avikela amaseli womzimba nezicubu ekushetshiseni kweminyaka ukucindezeleka kwe-oxyidative.
I-Oyster peptide nayo iqukethe ama-amino acid, ngaphandle kokuthuthukisa umsebenzi wesibindi, ongavimbela ukunqwabelana kwe-lactic acid. Ngaphezu kwalokho, i-acid iyasiza ekukhululekeni kokukhathala ngokomzimba nangokwengqondo. Lokhu kusiza umuntu ukuba athole amandla amaningi futhi abe nomqondo ocace futhi oqabulayo ngemuva kwesimo esicindezelayo noma ukugula.
Izinzuzo ze-Oyster peptide zendoda
Amadoda anezinkinga zomsebenzi wobulili angazuza kakhulu kwi-oyster peptide. Lokhu kufaka phakathi abesilisa abane-erectile dysfunction, ukungabi namandla, i-prostate noma i-hypoplasia yangaphandle, phakathi kwezinye izifo zesilisa nezimo. I-Oyster peptide ingathuthukisa impilo yabo yezocansi.
Amandla ngemuva kwekhono lokuphucula impilo yezocansi i-oyster peptide ingukuqukethwe kwayo okuphezulu kwe-zinc, kucatshangelwa ukuthi i-oyster ingumthombo ocebile we-zinc. Okuqukethwe kwe-zinc ku-oyster kukhulu ngokuphindwe kayishumi kunenyama ebomvu.
Ngokwesayensi, i-zinc kufakazelwe ukuthi ikhuphula izinga le-testosterone yamahhala kumuntu. Ngakolunye uhlangothi, ukushoda kwe-zinc kuyimbangela ehamba phambili yezinkinga zobulili zabesilisa njenge-erectile dysfunction. Lokhu kungenxa yokuthi zintula i-zinc eyanele ukukhiqiza i-testosterone yokufaka nokugcina izinhlamvu zesibili kowesilisa. Kakhulu, amadoda ane-testosterone ephansi athole ama-libido aphansi nokusebenza kocansi.
Ngaphezu kwe-zinc, i-oyster ekhishini nayo iqukethe inani eliphakeme le-vithamini D, esinye isakhamzimba esisiza nomzimba womuntu ukukhiqiza i-testosterone eyengeziwe. Kuthuthukisa namandla emisipha nokwakheka kwayo.
Ngaphandle kwalokho, i-oyster peptide inothile ku-arginine, ukulandelela izinto kanye ne-selenium, konke lokhu okubamba iqhaza elibalulekile ekukhiqizeni isidoda. Ngenxa yalokhu, owesilisa osebenzisa lo mkhiqizo we-oyster uhlangabezana nokuqina kokuzala.
Ngakho-ke, lapho indoda ithatha i-oyster peptide, amazinga akhe wokukhiqizwa kwe-testosterone kanye nesidoda ayanda, ngaleyo ndlela enze ngcono impilo yakhe yezocansi. Ngenxa yamandla omzimba ajwayelekile kanye nama-testosterones akhuphukayo, indoda iyakwazi ukuba ne-libido esheshayo neningi. Futhi, angalondolozela ubumbano isikhathi eside.
Ngaphandle kokungasebenzi ngocansi kanye nokungabinamandla, futhi kuyikhambi eliphumelelayo lezimo zesilisa ezifana nokwanda kweprostate kanye ne-hypoplasia yangasese. Kungakho izingxenyana ze-oyster, ikakhulukazi i-oyster peptide, bezisetshenziswa kakhulu phakathi kwamadoda amakhulu eminyaka-ekukhuthazeni impilo yezempilo yabesilisa.
Umphumela womthamo owodwa we-oyster peptide dose ungahlala izinsuku eziyisikhombisa kuya kweziyishumi. Lokhu kusho ukuthi indoda akudingeki ukuthi ithathe nsuku zonke ukuze izuze ekuzuzeni kwayo kwezocansi. Cishe amahora ayi-12 ngemuva kokudla, owesilisa uqala ukuzizwa enamandla futhi unesifiso sokuya ocansini.
Izinzuzo ze-Oyster peptide zabesifazane
Enye yezinzuzo ezibalulekile ze-oyster peptide ukuthuthuka kwamandla okuqina komzimba. Kanjalo, lapho owesifazane ebhekana nobuthakathaka be-antepartum noma i-postpartum ebuthakathaka ethatha lokhu kudla, uzizwa enamandla ngokwengeziwe.
Ngokwengeziwe, njengamadoda, abesifazane nabo bathola impilo engcono yezocansi ngemuva kokuthatha i-oyster peptide. Umzimba wowesifazane ukhiqiza ama-testosterones kepha emaqanda.
Kodwa-ke, abesifazane be-menopausal bavame ukunciphisa amazinga e-hormone, futhi ngenxa yalokho, bathola ukoma okuncane kwe-libido kanye ne-vagina.
Ngenhlanhla, ukulethwa okwengeziwe kwe-zinc yi-oyster peptide kukhuphula izinga le-testosterone yowesifazane. Umphumela walokhu wukudlondlobala kocansi olwengeziwe kanye 'nokugcotshisiwe' kwesitho sangasese sowesifazane. Ngaleyo ndlela, uzokwazi ukujabulela ukuhlangana kwezocansi kangcono.
Yiziphi izinzuzo ze-Oyster Peptide uma ziqhathaniswa neminye imikhiqizo yokuthuthukisa ubulili?
Ngokungafani iningi ukuthuthukiswa kocansi imikhiqizo, i-oyster peptide ayinayo imiphumela emibi ngoba konke kungokwemvelo. Ngaphandle kwalokho, umuntu akufanele ayithathe nsuku zonke, njengoba kunjalo ngeminye imikhiqizo yokuthuthukisa ezocansi. Umphumela wethamo elilodwa le-oyster peptide ungahlala izinsuku eziyisikhombisa kuya kweziyishumi.
Inqubo Yesisusa Ye-Oyster Peptide
Nazi izinyathelo ezilandelwa ukukhipha i-oyster peptide enyameni ye-oyster.
Isinyathelo sokuqala: Ukwelapha inyama ngosawoti we-calcium
Inyama ye-oyster ingumhlabathi kanye nosawoti we-calcium namanzi. Lokhu kuphumela ekutsheni kwe-oyster inyama. Isinyathelo lesi senzelwe ukwenza kusebenze futhi kukhululwe ama-enzyme ama-endo native aqukethe kuma-oysters. Ngenxa yalokho, amalungiselelo e-enzymatic ahilelekile ku-enzymatic hydrolysis ayancishiswa.
Isinyathelo 2: I-enzymatic hydrolysis
I-oyster inyama slurry ekhiqizwa esinyathelweni sokuqala ifakwa ngaphansi kwe-enzymatic hydrolysis. Lokhu kufinyelelwa ngokuvusa ama-slurry aye ku-35 ° C kuye ku-45 ° C cishe ihora elilodwa noma amabili. Ngemuva kwalokho, i-enzymme yamaprotheni engathathi hlangothi noma i-alkaline proteinase yengezelelwa kwi-slurry. Izinga lokushisa laguqulwa lafika ku-50 kuya ku-60 ° C ukuze i-hydrolysis iqhubeke amahora amahlanu kuya kwayisishiyagalombili.
Ngemuva kwalokho, i-pH iguqulwa ibe ngu-5.0 iye ku-5.5, i-flavour proteinase ingeziwe bese i-enzymatic hydrolysis ivunyelwe ukuqhubeka ngamanye amahora amabili kuya amathathu. Ngemuva kwalokho, lo ophakeme osuka lapho uthola isentirifuged ukuze athole uketshezi olungenamsoco lwe-oyster.
Isinyathelo 3: Ukuhlela kabusha nokucoca
Ikhabhoni esebenzayo iyangezelelwa ku-oyster ongahluziwe oyiphutha etholakala esinyeni sesibili. Ingxube ivuselelwa emazingeni okushisa aqala ku-45 ° C kuye ku-55 ° C imizuzu engama-30 kuye kwengama-60. Ngemuva kwalokho, iyabhalwa futhi ihlungiswe nge-membrane ye-ceramic. Ukuhlunga okuholela yilokho esikubiza njengesixazululo esihlanziwe se-oyster peptide.
Isinyathelo 4: Ukugxilisa ukomisa nokufafaza
Isixazululo se-oyster peptide ehlanziwe sigxiliwe kokuqukethwe okuqinile okungama-35% ngekhonsathi ye-vacuum. Bese yomiswa isifutho ukuze ikhiqize i-peptide eqinile ye-oyster enambitheka kamnandi futhi ingenalo iphunga elimnandi lezinhlanzi.
Ungayithatha kanjani i-Oyster peptide powder? Umuthi we-Oyster peptide?
Unezinketho ezimbili ongazithatha i-oyster peptide powder. Owokuqala uwusunduza ngebhodlela eliqukethe inani elifanele lamanzi futhi liphuza le nhlanganisela. Ngenye indlela, ungayithatha eyomile bese uphuza amanzi ukuze uyijule esiswini sakho.
Awukho umthamo oqondile wama-posesides e-oyster. Kodwa-ke, isilinganiso esimaphakathi abanye odokotela abasincomayo singama-500 mg, sithathwa kathathu ngosuku. Noma kunjalo, ngoba lokhu kungukudla kwemvelo okuphephile futhi okujwayelekile okuphephile, ungaguqula umthamo up phezulu noma phansi, kuya ngezidingo zakho.
Oyster Peptide Side umphumela
Akukho miphumela emibi efakazelwe ngokwesayensi ye-oyster peptide noma i-oyster peptide ekhishwe. Lokhu kungenxa yokuthi umkhiqizo ungokwemvelo ngokuphelele, akukho zengezo eziyingozi noma izithako ezifakwayo.
Kodwa-ke, abantu abane-allergies yasolwandle bangathola ezinye izindaba zezempilo ngemuva kokusebenzisa i-oyster. Ngakho-ke, umuntu onenkinga yokudla kwasolwandle kufanele agweme imikhiqizo ye-oyster, kufaka phakathi ne-peptide.
Futhi, abantu abanezinkinga zezempilo ezazivele zikhona bayelulekwa ukuthi bakhulume nochwepheshe babo bezempilo ngaphambi kokuqala ukuthatha imikhiqizo ye-oyster. Lokhu kuzobasiza ukuthi bagweme imiphumela engahle ivele ekuxhumaneni phakathi kokukhipha i-oyster nezinye izidakamizwa okungenzeka ukuthi baziphuza.
Ngaphandle kwalokho, ezinye izimo zempilo eziphumayo zingase zibe zimbi ngokwengeziwe ngokuhlinzekwa kwe-zinc emzimbeni.
Ngenxa yomphumela wayo wemithi, i-oyster peptide powder isetshenziswa ekwelashweni kwezokunakekelwa kwempilo. Isibonelo, ngenxa yedatha ebalulekile emtholampilo eqinisekisa amandla ama-oysters okufakazela i-serum yendoda, amadoda amaningi anezinkinga zempilo yezocansi asebenzisa umkhiqizo.
Ngaphezu kwalokho, i-powder yemvelo isetshenziselwa ukulawulwa kwe-lipids yegazi nokuvimbela ukuhlanganiswa kweplatelet. Kunconyelwe futhi nabantu abanezimpawu ze-hyperglycemia, ukuzivikela komzimba okuncane noma imetabolism engeyinhle njengoba kuthuthukisa izimo zezempilo.
Abantu abanomdlavuza bangathatha futhi i-powder ukuphathwa kangcono kwalesi sifo. Umkhiqizo we-oyster ungavimba amaseli womdlavuza ukuba asakazeke. I-Powder nayo ingasetshenziselwa ukuphulukisa amanxeba nokuphuculwa kwenhliziyo nethambo lokuqina kwenhliziyo.
Okunye ukusetshenziswa kwe-oyster peptide powder kufaka:
Inzuzo yokulwa nengcindezi
Njengomuthi wokukhulisa ijwabu leduna
Ukuvimbela ukuguga okwedlulele
Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa i-oyster peptide powder njengesengezo sokudla. Inambitha okuhle futhi ayisho iphunga elithi 'inhlanzi' njengemikhiqizo ethile yasolwandle. Ngaphandle kwalokho, ucebile ngezakhamzimba umzimba wakho odinga ukuba ziphilile. Njengoba kunje, kungaba ngumphelelisi omuhle ekudleni kwakho okujwayelekile.
Ama-peptides e-oyster, okukhishwa kwe-oyster, kuyizithasiselo eziphephile kakhulu ezingasetshenziswa ezinzuzweni ezahlukahlukene zezempilo. Enye yezinzuzo ukuthuthukiswa kokusebenza kwabesilisa. Lama-peptides angakhuphula i-libido endodeni ene-low sex drive nokubala kwesidoda kwabesilisa abanezinkinga zokuzala. Abesifazane be-menopausal abahlangabezana ne-low sex drive kanye nokuqina komlomo wesibeletho bangazuza kakhulu ngokukhipha i-oyster peptide.
I-Chen, D., Liu, Z., Huang, W., Zhao, Y., Dong, S., & Zeng, M. (2013). Ukuhlanzwa kanye ne-peptide ebopha i-zinc ebopha kusuka ku-oyster protein hydrolyzate. I-Journal ye-Functional Foods, 5(2), i-689-697.
Qian, ZJ, Jung, WK, Byun, HG, & Kim, SK (2008). Umphumela wokuvikelwa kwe-peptide ye-antioxidative ehlanjululwe emgodini wokugaya we-oyster, i-Crassostrea gigas ngokumelene nomonakalo wamahhala we-DNA. Ubuchwepheshe be-bioresource, 99(9), i-3365-3371.
Umayaparvathi, S., Meenakshi, S., Vimalraj, V., Arumugam, M., Sivagami, G., kanye no-Balasubramanian, T. (2014). Umsebenzi we-antioxidant nomphumela we-anticancer we-peptide ye-bioactive evela ku-enzymatic hydrolyzate ye-oyster (Saccostrea cucullata). I-Biomedicine & Nutrition Yokudla, 4(3), i-343-353.
Xiaochun, XIAO, Xufeng, ZHAI, Guo, X., Yongjun, LOU, & Wah, C. (2017). US Patent Isicelo No. 15 / 542,743.
UZeng, M., Cui, W., Zhao, Y., Liu, Z., Dong, S., & Guo, Y. (2008). I-peptide esebenzayo ye-antiviral evela ku-oyster. I-Chinese Journal ye-Oceanology ne-Limnology, 26(3), i-307-312.